I-Raw Cytomel (T3) ipowder (55-06-1) hplc =98% | I-AASraw I-Fat ilahlekile i powder
I-T3 (Cytomel) ipowder
/ iimveliso / Prohormone / I-Cytomel (T3) ipowder
2.75 ngaphandle kwe 5	ngenxa ye 4 amanqaku umthengi
SKU: 55-06-1. Udidi: Prohormone
I-AASraw ikunye kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kulawulo lwe-Cytomel (T3) powder (55-06-1), phantsi kolawulo lweCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
I-video ye-Cytomel (T3)
I-Cytomel (T3) ipowder Abalinganiswa
igama: I-Cytomel (T3) ipowder
I-molecular Formula: C15H11I3NNaO4
Isisindo somzimba: 672.96
I-Cytomel (T3) yokusetyenziswa kompu
Amagama asePytomel powder
I-Cytomel powder (i-CAS 55-06-1) yaziwa nangokuthi yi-Cytomel, i-Cynomel, i-Cyronine, i-Cytomel Tabs, i-Eyroid, i-Linomel, i-Liyronron, i-Neo-Tiroimade, i-Ro-Thyronine, i-T3 powder, iTertroxin, iTybon, iTi-Tre, iTiromel, iTironina , kunye neTrijodthyronin.
Ukusetyenziswa kwePOSNUMX powder
I-T3 powder ayinqabile ukuba ibekwe ngokwabo ukujongana neengxaki ze-thyroid; ngokuqhelekileyo ibhalwe nge-T4. Kwixesha elidlulileyo, i-cytomel yayiyonyango elungiselelwe ukunyanya; nangona kunjalo, ukwanda kweengxaki zeentliziyo kunye nokunyanzeliswa kwengqondo kugxothwe i-T3 kule sicelo.
I-T3 isebenza kumgangatho weselula ngokunyusa i-metabolism yeprotheni, i-carbohydrates, kunye namafutha, kunye nokunyuka kwentliziyo kunye nokuhamba kwegazi. I-T3 yinto enqamlekileyo yokushisa amafutha ukususela ekubeni i-metabolism yakho yanda kakhulu ngelixa isebenzisa.
Ezi zinzuzo zabasebenzi bomzimba ukuba banakho ukufikelela kwi-calorie ephezulu yokutya kokuncintisana njengoko bezitshisa iikhalori ezingaphezu kwezinga eliphezulu. Kodwa khumbulani, i-T3 iyinxalenye ye-catabolic (unokuthi ulahlekelwe ubunzima be-muscle) kunye nokusetyenziswa kwexesha elide kunokunciphisa ukunyameka kwethambo.
I-Cytomel (i-CAS 55-06-1) ibhetele ithathwa ngamaxesha amaninzi ngosuku. Amanqanaba e-T3 aya kufikelela kwiiyure ezingama-2 emva kokungena kwaye ziya kupheliswa kwiiyure ze-4. Ukwandisa ukufumaneka kwe-T3 kunye nokugcinwa kwamanqanaba e-T3 yonke imihla, ukulandelwa kwamaninzi kwinqanaba elinconywayo lezenzo.
I-Multi-dosing igweme ukuxhomekeke ngokupheleleyo kumzimba wakho ukuguqula i-T4 ukuya kwi-T3.
Nangona i-T3 ayinayo i-steroid, kukho ubungqina bokuthi i-T3 ikhuthaza ukusebenzisa i-steroid. Oku kunokwenzeka ngenxa yenani elinyukayo leprotabolism ngelixa usebenzisa i-T3.
Uza kudla ngokufunda ngamalungu omzimba abamba i-T3 nge-anabolic steroid cycle. Ukongezelela, i-clenbuterol yenye into eyenziwa rhoqo nge-T3 ukwenza i-effective-pre-contest-fat loss loss regime.
Uninzi lwabalimi bomzimba balisebenzisile eli liyeza ngokukhuselekileyo nangokuphumelelayo. Kukho amabali abantu abaneengxaki nge-thyroid gland "yokuvalwa" emva kokusetyenziswa kwe-T3. Ukususela ekuhloliseni iincwadi, kubonakala ukuba ukubuyiswa yinto enokwenzeka kakhulu, ukuba akukho mvelaphi yesifo se-thyroid.
Isilumkiso kwiCytomel powder
Ukongezwa ngokukodwa kwenkxaso ye-thyroid enye into. Ininzi ibhaliwe kwaye ixutywe malunga ne-guggulsterones kunye ne-forskolin. Uncwadi lukhuthaza ukuvelisa i-thyroid kwimveliso yomibini, nangona kunjalo, indlela (s) yokusebenza ayifumanekanga.
Ukulahlekelwa ubunzima obuninzi kuncedisa ukusebenzisa okanye kwimveliso yomibini.
Ngokomntu, ndiyakholelwa ukuba banomdla kuphela ekuphuculeni ukusebenza kwe-thyroid kwaye indlela yokujonga ingxelo ye-thyroid ye-hormone ilahlekelwa ezininzi kwiintlobo ezinokufumaneka. Nangona kunjalo, banokuba negalelo elihle kwi-thyroid gland recovery function emva kwengxelo ye-T3.
Ukusetyenziswa kwe-hormone yokukhula (GH) kunye ne-T3 ngexesha elifanayo kufuneka kucatshangelwe. Ukwanda okuqhelekileyo ekugcinweni kwe-nitrogen ehambelana nokusetyenziswa kwe-GH kupheliswa xa amazinga e-T3 akhula.
Esi siphumo sithathwe ngokuba yi-T3 (i-CAS 55-06-1) amanqanaba akhula e-insulin njengento yokukhula ebopha iiprotheni, ngoko ukunciphisa ukufumaneka kwe-igf-1 (5). I-hormone yokukhula sele inomgangatho ovuthayo ocolileyo kuwo, ngoko kubonakala ngathi iindleko eziphezulu zingasebenzisi i-T3 ngokufanayo ne-GH.
I-T3 powder Imiyalelo eminye
I-Cytomel yiyobisi ye-thyroid engasetyenziselwa ngokulula ukunciphisa i-flab engaphezulu kwimizimba yomntu. Enyanisweni, kusebenza ngokusebenzisa indawo ye-hormone ye-thyroid. I-Cytomel T4 iphinda ikhulise izinga lomlinganiselo womzimba womsebenzisi kwaye inika amandla amakhulu ekugaya ukutya. Xa kuthathwa rhoqo, i-steroid inceda umntu ukuba anciphise ubunzima bakhe kunye nokuncedisa ukunyamekela impilo enempilo.
Singaqwalasela ngokucacileyo ukuba kukho ezininzi iinzuzo zokusebenzisa i-Cytomel ukwenzela ukuba kulungiswe izinga lokunciphisa umzimba. Iyakwandisa ukwandisa amandla omzimba ukuvelisa amaprotheni. Kodwa oko kuboniswa ngokuqhelekileyo kukuba kusebenza njengento engabonakaliyo xa ingalawulwa yi-anabolic steroids.
Ngokuqinisekileyo into ehlala yinto yokugqibela ekubandakanyiweyo kwintlanzi yokutya ngenxa yokuba idume ukuhlamba amanqamlezo omzimba okanye amanqatha anamanqamzana njengoko kuthiwa ngumzimba. Yinamanhla engafuni ukukushiya ezinsukwini ezimbalwa zokugqibela zokutya. I-Cytomel isebenza kakhulu phakathi kwababhinqa besifazane. Njengoko abafazi bephucotha ukuxiliswa komzimba ngokuthelekiswa namadoda, kunzima kakhulu ukuba bafumane uhlobo olufanelekileyo lokukhuphisana, ngokubonelela ngemilinganiselo yanamhlanje. Ukuncitshiswa okukhulu kweekhalori kunye nokutya ngaphantsi kwe-1000 ikhalori / imini kunokugwenywa ngokusebenzisa iCytomel. Ngokuqinisekileyo, abafazi banamathele ekujonganeni neziphumo ezibi kunamadoda kodwa ngokubanzi bahamba kakuhle malunga ne-50 mcg ngosuku. Kubaluleke nakakhulu ukuba isilwanyana akufanele sithathwe kwiiveki ze-6 okanye kunjalo. Ubuncinane iinyanga ze-2 ukuziyeka kwiCytomel kufuneka zilandelwe. Abantu bathabatha umlinganiselo ophezulu weziyobisi ngaphezu kwexesha elide ixesha lisesisongweni sokwenza i-thyroid engapheliyo.
Kwiingqungquthela zomzimba, i-Cytomel isetyenziselwa ngokuyinhloko njenge-fat loss drug. I-hormone ye-thyroid ibizwa ngokuba yi-regulators of body body. Umgangatho ophezulu we-T3 ukhawuleza ukukhawuleza umthamo womntu wonke, ngaloo ndlela umvumela ukuba atshise ezininzi zeekhalori kwaye asebenzise iikhalori ngokufanelekileyo.
Ukuthetha malunga nomyinge, umntu kufuneka aqikelele kangako njengoko i-Cytomel iyona ndlela iphumelele kakhulu kodwa i-hormone ye-thyroid. Kubaluleke kakhulu ukuba umntu aqale ngeqondo eliphantsi, ukwandisa okufanayo ngokukhawuleza kwaye ngokufanelekileyo kwixesha leentsuku ezimbalwa. Uninzi lwabadlali baqala ngokuthatha ityhubhu ye-1 25mcg ngosuku kwaye ukwandisa umthamo nganye kwi-3 kwii-4 iintsuku nge-tablet ye-1 eyongezelelweyo. Amanye amanani aphezulu ngaphezu kwe-100 mcg ngosuku ayilubalulekanga kwaye akunakucetyiswa.
Cytomel powder Ukuthengisa
Indlela yokuthenga i-Cytomel powder: Thenga i-T3 powder (CAS 55-06-1) ukusuka AASraw
I-T3 powder Recipes (CAS 55-06-1):